12 Fisolokiana lehibe momba ny dia lavitra hialana amin'izao tontolo izao | Save A Train
Home > Travel Tips > 12 Fisolokiana lehibe momba ny dia lavitra hialana amin'izao tontolo izao
Toerana mahafinaritra izao tontolo izao, fa ny mpandeha voalohany dia mety ho latsaka ao anaty vela-pandrika fizahan-tany ary ho tonga sorona amin'ny fisolokiana lehibe. Ireo no 12 scam amin'ny fitsangatsanganana lehibe hialana amin'izao tontolo izao; avy any Eropa ka hatrany Sina, ary na aiza na aiza.
1. Fisolokiana fitsangatsanganana mba hialana amin'izao tontolo izao: Ny fiakaran'ny vidin'ny taxi - Detour
Fifamoivoizana mafy, ny mpamily fiarakaretsaka milaza aminao ny tantaran'ny tanàna, ary ny fomba fijery vaovao avy eo am-baravarankely dia manamora ny fidirana amin'ny scam amin'ny dia be loatra amin'ny taxi.
Ny fivezivezena amin'ny taxi dia toa ny safidy fitsangatsanganana mahafinaritra indrindra amin'ny maha mpizahatany anao, fa mety hivadika ho iray amin'ireo scam amin'ny fitsangatsanganana lehibe indrindra manerantany. Amin'ny maha mpizahatany anao dia tsy ho fantatrao ny làlan-kaleha haingana sy tsara indrindra avy amin'ny seranam-piara-manidina mankany amin'ny hotely, na avy amin'ny zavatra manintona iray mankany amin'ny iray hafa, noho izany ny mpamily fiarakaretsaka dia mety hankalaza amin'ny anaranao ary hangataka taham-pahatezerana na hitondra anao amin'ny lalan-kely, ho an'ny dia tsy tokony haharitra mihoatra ny 15 ahy.
Ahoana ny fomba hisorohana ny fandoavan-ketra amin'ny taxi?
Fikarohana mialoha ny tahan'ny taxi takiana ao amin'ny Travel toerana itodiana. Fanampin'izany, alao antoka fa manana fampiharana sari-tany tsara ianao, tsy mila Wi-Fi izany, hahafahanao mijery ny làlana amin'ny fotoana rehetra, ary tena zava-dehibe, misafidy orinasa taxi mendri-pitokisana, na mandeha lamasinina.
2. Ny firoboroboana amin'ny akanjonao - Tranom-boromailala
Raha mikasa ny handeha ho any Arzantina ianao, ohatra, tokony ho fantatrao ny fisidinan'ny voromailala amin'ny fitetezam-paritany fitateranao. Ity karazana scam amin'ny dia ity dia malaza be any Buenos Aires, rehefa tonga eo aminao ny olona sariaka iray, te hanampy satria misy riaka eraky ny akanjonao rehetra.
Alao an-tsaina hoe mankafy ny afovoan-tanàna ianao na manana andro mahafinaritra ao amin'ny valan-javaboary, mijery manodidina, ary tampoka teo dia nisy olon-tsy fantatra sariaka nanatona anao, ampahafantaro anao fa misy riaka eraky ny akanjonao rehetra. Napetrakao amin'ny tany ilay kitapo, gaga ny manodidina mijery ny fahatairana, ary mandritra izany fotoana izany ny pasipaoro, poketra, ary lasa ny fanananao sarobidy rehetra.
Ahoana ny fomba hisorohana ny fitosahana amin'ny hosoka amin'ny dia amin'ny akanjo?
Mizaha toa ny eo an-toerana, tandremo ny manodidina anao, ary andramo hitazomana hatrany ny masonao.
3. Fisolokiana fitsangatsanganana mba hialana amin'izao tontolo izao: Ny scam amin'ny fitsangatsanganana ATM
Mampandeha izao tontolo izao ny vola, mazava ho azy fa ny iray amin'ireo scam amin'ny fitsangatsanganana lehibe indrindra manerantany dia misy vola. Iray amin'ireo scam amin'ny fitsangatsanganana lehibe indrindra eran'izao tontolo izao ny fisolokiana ATM rehefa misy mpamaky carte de crédit azo esorina maka tahaka ny mombamomba anao ary avy eo nampiasa azy ireo hamafana ny fifandanjanao rehetra..
Ahoana ny fomba hisorohana ny scam amin'ny ATM?
Raha tena ilaina izany, manovo vola amin'ny banky ATM malaza sy malaza. In banky lehibe any Eropa, misy ny filaminana, ka ny vintana hananana mpamaky karatra ATM dia manakaiky ny aotra.
Munich mankany Hallstatt miaraka amina lamasinina
Innsbruck mankany Hallstatt miaraka amina lamasinina
Passau mankany Hallstatt miaraka amina lamasinina
Rosenheim mankany Hallstatt miaraka amina lamasinina
Iray amin'ireo hosoka fitetezana mahazatra eto amin'izao tontolo izao, malaza ilay vongan-kazo sy fakana fitateram-bahoaka, ary amin'ny mari-trano. Tonga teo amin'ny fiaran-dalamby ianao, metro, na miandry eo amin'ny kianjan'i Prague amin'ilay famantaranandro malaza rehefa sendra olona sendra sendra totohondry tsy nahy ianao.
Na dia mety ho lozam-pifamoivoizana aza izany, Azo inoana kokoa fa mpangarom-paosy pickpocketing kasaina hatao. Mety ho fizarana segondra izy io, ny “miala tsiny”, ary ny kitapom-bolanao, mijery, na very ny firavaka. Ny scam sy ny scam dia iray amin'ireo zava-dehibe tokony ho fantatra rehefa rahoviana mandeha any Eoropa.
Ahoana ny fomba hisorohana ny bump sy ny grab?
Avelao ao amin'ny efitranon'ny hotely ny fanananao, ary aparitaho izay rehetra entinao: poketra ao am-paosin'ny palitao anatiny ohatra.
5. Fisolokiana fitsangatsanganana mba hialana amin'izao tontolo izao: Ilay honahona
Mitovy amin'ny vodilanitra sy fakana, ny fisolokiana mitobaka, dia rehefa feno olona tampoka ianao, tsara toa vahiny izany aminao. Raha ny tena izy, mifankahalala tsara ireto vahiny ireto, ary nanomana tsara fihaonana hafahafa, na mivondrona. Toa tsy manan-tsiny tanteraka io fomba io, raha ianao no voahodidinina sy voafantina.
Amin'ny toerana be olona io matetika no mitranga, izay itovizan'ity vondrona ity amin'ny vahoaka sy korontana. Manomboka mihodinkodina anao izy ireo ary manelingelina anao raha ny hafa kosa mihazona ny zava-drehetra. Ny fitazonana ny volanao amin'ny toerana iray dia iray amin'ireo 10 hadisoana amin'ny dia tokony halavirinao any Eropa.
Ahoana ny fomba hisorohana ny fisolokiana mivonto?
Halaviro fotsiny ny vahoaka, ary afatory ny palitao, na araho maso ny entanao, kokoa, apetraho eo alohanao izay kitapo rehetra.
6. Ilay eo an-toerana sariaka
Ilay vahiny tsara tarehy sy sariaka dia scam amin'ny dia malaza manerantany. Na mandeha amin'ny Kianja Mena na Paris ianao, hisy foana ny olona eo an-toerana namana manolotra ny fanampiany hahatratra ny Tilikambo Eiffel na hampiseho anao fotoana mahafinaritra manodidina ny tanàna.
Ary, Tena hanampy be tokoa izy ireo amin'ny fampisehoana ireo klioba mahafinaritra rehetra manodidina, fa ny scam ihany no ataonao amin'ny rahampitso maraina, mifoha, ary ny mahatsikaritra ny volanao dia lany avokoa. Noho izany, dia irery ohatra, manerana an'izao tontolo izao dia mety ho fotoana tsy manam-paharoa hihaona amin'ny mponina, fa mety hivadika nofy ratsy ratsy indrindra ihany koa ianao.
Ahoana ny fomba hisorohana ny scam momba ny dia an-toerana?
Mahafinaritra ny fihaonana amin'ny olona eo an-toerana, ary iray amin'ireo traikefa tsara indrindra. Na izany aza, tandremo izay atokisanao, ary mandany alina miaraka amin'ny. Ny traikefa nahafinaritra tao amin'ny firenena hafahafa dia mety hivadika loza tampoka, koa mitandrema.
7. Fisolokiana fitsangatsanganana mba hialana amin'izao tontolo izao: Ny scam amin'ny bracelet
Free fahatsiarovana avy any amin'ny firenena vahiny mahavariana, fa tsy misy zavatra maimaim-poana tokoa eto amin'ity tontolo iainantsika ity. Ary noho izany, aza mianjera amin'ny scam amin'ny bracelet maimaim-poana izay mazàna misy vehivavy eo an-toerana manatona anao mitsiky, hametrahana fehin-tànana amin'ny hato-tànanao.
Tsiky sy sariaka, hanolotra anao haba na rojo tena izy izy ireo ho entina mody, raha ny tànany iray hafa dia manatratra ny kitapom-bolanao, sy firavaka. Ny fanolorana zavatra mahafinaritra sy maimaim-poana dia fanelingelenana lehibe ary miasa amin'ireo mpizahatany tsy manan-tsiny maro.
Ahoana no hialana amin'ny hosoka amin'ny brasele?
Aza milatsaka fahatsiarovana fahatsiarovana, ary sokafy foana ny masonao, ary mandà amin-katsaram-panahy ny handray fanomezana maimaimpoana avy amin'ny olon-tsy fantatra.
8. Ilay zaza mangataka
Miakanjo akanjo malahelo, maloto, mangataka vola na sakafo, ilay zaza mangataka dia iray amin'ireo scam amin'ny ratram-po eran'izao tontolo izao. Avy any Eropa ka hatrany Sina, misy ankizy mijoro amoron-dalana, mihira dolara amina kianja afovoany, na mikitika eo am-baravarankely taxi.
Matetika ireo ankizy ireo dia tsy very toa ny endrik'izy ireo, fa nirahina handray andraikitra. Mazava ho, misy ankizy tena mila sakafo sy fanampiana.
Ahoana no hisorohana ny fisolokiana amin'ny zaza mangataka?
Sarotra izany satria feno zaza mahantra ity tontolo ity izay tsy manan-tsafidy hafa afa-tsy ny mangataka. Na izany aza, azonao atao ny manolo-tena hividy sakafo ho azy ireo na amin'ny fomba hafa, noho ny fanomezana vola. Atỳ, azonao atao ny manamarina ny fihetsik'izy ireo, ary raha tena sahirana tokoa izy ireo na aorian'ny kitapom-bolan'ny mpizahatany fotsiny.
Antwerp mankany Luxembourg miaraka amina lamasinina
Metz mankany Luxembourg miaraka amin'ny lamasinina
9. Fisolokiana fitsangatsanganana mba hialana amin'izao tontolo izao: Mihidy ny fisarihana
Nojerena mialoha ny ora fisokafana, saingy gaga ianao rehefa tonga any amin'ny tempoly na miantsena dia lazain'ny olona eo an-toerana fa nakatona io. dia, rehefa hitan'izy ireo ny fahadisoam-panantenanao, Manolotra anao izy ireo hitondra anao any amin'ny tsangambato mahafinaritra na fivarotana iray hafa, tsara kokoa noho ilay nakatona aza.
Ny olona eo an-toerana dia mety hanolotra traikefa nahafinaritra, fa tena mamiravira anao tokoa izy ireo, amin'ny fangatahana sarany fidirana lafo, na mitondra anao miantsena any amin'ny toerana ahazoan'izy ireo komisiona matavy.
Ahoana no hialana amin'ity scam amin'ny dia ity?
famangiana toerana ivelan'ny lalana nokapohina mahafinaritra, aza hadino ny mijery ny manodidina ary raha misy fomba hafa. Ankoatry ny, mikaroha mialoha mba hahitana ireo manintona tsara indrindra hitsidika any Eropa. Raha maimaim-poana ny fisarihana, avy eo tsy misy antony hanoloana azy amin'ny iray lafo loatra, ary mitovy amin'ny fivarotana misy tsikera tsara.
Zurich mankany Lucerne miaraka amina lamasinina
Bern mankany Lucerne miaraka amina lamasinina
Geneva mankany Lucerne miaraka amina lamasinina
Konstanz mankany Lucerne miaraka amina lamasinina
10. Avelao aho haka ny sarinao
Mety hahafinaritra ny fitsangantsanganana irery, ary indraindray feno nenina dia tsy misy olona miaraka aminao afaka manao ny sary media sosialy tonga lafatra. Ilay Big Ben na Firenze ao aoriana, mijery ny manodidina ianao dia avy eo manatona anao manolotra sary mahafinaritra, avy amin'ny zoro lehibe.
2 segondra vitsy dia lasa ny fakantsaranao sy ny sary mahafinaritra rehetra, satria nandositra niaraka tamin'izy ireo ilay olon-tsy fantatra. Mety hitranga na aiza na aiza eto amin'izao tontolo izao izany, na amin'iza na amin'iza, satria inona ny lesoka mety hitranga? fa izany no izy.
Mitadiava mpizahatany hafa, angamba ny mpandeha irery koa, na mpivady. Ity no fomba azo antoka hahazoana sary tonga lafatra sy hitazomana ny fakantsary, ary ho takalony, manolotena haka ny sarin'izy ireo.
11. Fisolokiana fitsangatsanganana mba hialana amin'izao tontolo izao: Ilay Switcheroo
Ny fomba tsara indrindra itantanana vola rehefa mandeha dia ny fananana vola kely miaraka aminao amin'ny fotoana rehetra. Raha tsy izany, mitandrema amin'ny faktiora lehibe, rehefa mandoa mpamily taxi na any amin'ny hotely fisakafoanana eo an-toerana. Azonao atao ny manome vola be ho an'ny fandoavam-bola kely, fa ireo mpandray kosa dia mody mandatsaka ilay volavolan-dalàna lehibe ary manova azy ho vola kely kely kokoa. Atỳ, soloin'izy ireo ny mpizahatany.
Cashiers, mpamily fiarakaretsaka, na mpiandry, dia mety ho mpilalao ao amin'ity scam scam ity. Ianao no ho be resy eto, raha tsy mitandrina.
Ahoana ny fomba hisorohana ny scam amin'ny Switcheroo?
Lazao ny sandan'ny faktiora omenao, ary fantaro ny fanovana tokony horaisinao.
12. Fisolokiana lehibe momba ny dia lavitra hialana amin'izao tontolo izao: Mpianatra anglisy mazoto
Miteny anglisy tsy fantatra izy ireo nefa miangavy anao hampianatra azy ireo. Ireo mpianatra anglisy be zotom-po dia miery ao amin'ny kafe sy fisotroana, hanomboka resaka mahafinaritra miaraka aminao, ary avy eo mangataka anao lesona anglisy tsy miankina ao amin'ny efitranonao.
Indray mandeha ao amin'ny hotely, ilay mpianatra anglisy mazoto dia afaka mivadika ho nightcap, ary mifoha amin'ny poketra sy pasipaoro halatra ianao. Ny marina dia tsy azo atao ny manatsara ny fahaizana fiteny amin'ny alina iray, ary na dia misy olona te hampihatra ny anglisy aza, ity lesona ity dia tsy voatery hitranga ao amin'ny efitranon'ny hotely na toaka.
Raha fintinina, ny dia lavitra no fomba tsara indrindra fivezivezena amin'izao andro izao, na aiza na aiza eto amin'izao tontolo izao. Ny antony dia mihasarotra hatrany ny famoahana scam momba ny dia. Izay voalaza, tsy mora toy izao ny mitety an'izao tontolo izao noho ny ankehitriny.
eto amin'ny Save A Train, faly izahay manampy anao amin'ny drafitra ny Toerana mahafinaritra Hotsidihinao ary hamita ny dianao am-pifaliana amin'ny fisorohana ny scam amin'ny dia.
Te hampiditra ny lahatsoratry ny bilaoginay hoe "Fisolokiana 12 lehibe hialana amin'izao tontolo izao" amin'ny tranokalanao ve ianao? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome antsika-bola miaraka amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmg%2Ftravel-scams-avoid-worldwide%2F- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
commontravelscamsineurope MajorTravelScamsToAvoidWorldwide Skama TouristicTraps TravelScams traveltips